Abo – Page 3 – Welcome to bilisummaa
ODFn Ari’un Wayyaanee ABO jabeessuufi Haaromisuufi carraa haaraya uuma.
Akkumma sab-qunnamitiilee adda addaa irraa dhagayaa jirrutti obboleeyyan keenya dhaaba haaraya ODF jedhu moggaafatanii qabsoo karaa nagayaa ummata keenya keessatti deebinee geggeesina jedhanii …
“NAMNI AKKA FEDHU DHABE AKKA HIN FEENE TAHA!” JA’A WARRI BIYYA KEENYAA HOGGAA MAAKMAAKAN…
“Aak..! Ja’an malee waan tufan, makmaakan malee waan himan..!” jachuun Oromoodha waa baayyee mul’isa. Aniis dubbii tiyya maakmaaksaan jalqabuun kiyya maakmaaksa isinii himuuf yookaa isin …
S. Sudan denies hosting Ethiopian rebels OLF in its territory
March 19, 2015 (JUBA) – South Sudan dismissed as unfounded reports alleging it was hosting Ethiopian rebels within territories as part of efforts to fight …
Waan Hundaa dura “Baga Biyya Keessan Ishee Dargaggummaa keessan Aarsaa itti Gootanitti Nagaan Dhuftan!!”
March 20, 2015	1
Seenaa Abdissa Haala Yeroo Irratti Yaada Dhuunfaa Kiyyaa!!! ==================================== Dhaabbilee ykn Paartiwwan Mirga uummata Oromoo kabachiisuuf dhaabbatan keessaa tokko kan ta’e Paartiin Adda Dimookiraatawaa Oromoo(ADO) …
Several members of the Eritrean based Ethiopian opposition party of Oromo Liberation Front (OLF) are reported to be in detention in the Eritrean military camp …
Osoo ABOn Dhalachuu Baatee Lakkoofsi Oromoo Amma Jiru Kun Ni Jiraa Laata?
2, Oromoon OdooGabronfattoota HabashaaHarkatti Kufuu Baatee Hoo Har’a Eessa Jira Laata..? Baarentuu Gadaa Irraa Yoon kaleessa yaadadhu, yoon waan Oromoon waggoota 100 oliif keessa turee …
Ibsa Miseensota Adda Bilisummaa
Oromoo Godina Kaaba Ameerikaa Mootummaan dargii kufe erga wayyaanneen Aangoo qabatee waggaa sadii guutee osoo hin turni ummata miliyoona torbaa ol beelaan qabame jedhame lallabamee …
IBSA WALGAHII KHR-ABO
Koreen Hoji-raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Guraandhala 19 – 23, 2015tti teessuma qabaate. Erga ABOn tokkoomee walgahiin akkasii tahuuf kun kan duraa tahuun walgahicha seensa-qabeessa taasisa. …
Ibsa Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo Godina Awurophaa.
Guyyaa 24-02-2015 Nuti miseensoni Adda bilisumma oromoo godina Awuropha hala dhiyenaa kana matan motummaa wayyannee kan ta.e abbay tshayen dhamsaa karoora abbotii isaa kan …
Ibsa Addaa Bilisumma Oromiyaa
February 22, 2015	2
Harka muraafi shalabbii harmaa kan habaleen raawatame rasaasatti jijjiiree murrriqii Saba Oromoof diinni haareysoomsuuf dhaadate oolchuun duursinee gumaa kalleessaa kafaluuf irroomuun Sabaa dirqama sardaadha. dhawwaaqni, …
November 16, 2017	21
Negessa Abdisa: Ni turra malee ni urra jette boombiin!!...
Tadele Sh Geresu: Kitaaba kana argadhuu naan danda'aa lataa?...
Ramadan Hussein: Galatooma...
Husen: Mashalahaa jzk...
Abdulkerim sheka: Galatoomii...